Warshada Shiinaha ee tooska ah waxay si toos ah u keentaa awood sare 12v 200ah agm gel baytariyada qoraxda soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Nolol
Soosaarka tooska ah ee warshadda 12v 200ah agm batari qoraxda
Codsiga: Qalabka Guriga, Nidaamyada Korontada, Nidaamyada Kaydinta Tamarta Cadceedda, Qalabka Korontada ee Aan Kala Go'ayn, Battery
Shahaadada: CE / ISO
damaanad: 3 sano, 2 sano
Magaca Brand: LANYU ama OEM
Voltage:12V Battery Wareegga Qoto dheer
Nooca baytari: Battery Acid Acid
Nolosha naqshadeynta: 5-8 sano
Midabka: Loo baahan yahay
Astaamaha:Batariga Wareega Qoto dheer 12V
Qaabka: 12v 200ah baytari inverter
Alaabooyinkayaga waxaa lagu isticmaali karaa UPS, iftiinka wadada qorraxda, nidaamyada qorraxda.
(10 saac, 1.80V / unug)
ku dallaca hadda
30I10A (3 daqiiqo)
Ku dallaca Voltage
Habka Dallacaadda (25 ℃)
Bixinta: -45 ℃ ~ 50 ℃
Qiimaha sabbaynaysa: 2.275± 0.025V/Ceel
100% DOD 572 jeer
Kharashka: -20 ℃ ~ 45 ℃
Qiyaasaha heerkulka: ± 3mV / unugga ℃
50% DOD 1422 jeer
Kaydinta: -30 ℃ ~ 40 ℃
lacag isku mid ah:
Kharashka Wareegga: 2.45±0.05V/Ceel
30% DOD 2218 jeer
Heerkulka Magdhawga Coefficient
± 5mV / unugga ℃
Wakhtiga sii daynta kala duwan ee terminal kala duwan Voltage, wakhtiga sii daynta (Amps,25)
Isku xidhka dareeraha joogtada ah ee joogtada ah (25 ℃, A)
"lanyu" baytari, Mainte-nance bilaash ah oo fududahay in la isticmaalo, Cilmi-baarista tignoolajiyada horumarsan ee casriga ah iyo horumarinta
baytariyada cusub ee waxqabadka sare leh, Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa tamarta qoraxda, tamarta dabaysha, nidaamyada isgaarsiinta, nidaamka offff-grid, UPS iyo fifields kale.Nolosha loogu talagalay batteriga waxay noqon kartaa siddeed sano ilaa isticmaalka qulqulka.
ISO9001 ISO14001 CE CGC TLC Shahaadada Alaabta Farsamada Sare iyo CUSUB
FIIRO GAAR AH: Xogta kor ku xusan waa qiyam dhexdhexaad ah, waxaana lagu heli karaa wareegyada lacag-bixinta/wareejinta.
Kuwani maaha qiimaha ugu yar.Naqshadeynta unugyada iyo batteriga / qeexitaannada waa wax laga beddeli karaaogeysiis la'aan.
1).Waa maxay noocyada baytariyada aad bixin doontaa?
Waxaan leenahay laba nooc oo batari vrla: AGM batari, agm batari wareegga qoto dheer iyo batteriga Gel.There badan oo batari model kala duwan halkan, waxaan ku siin karaan12v 100ah iyo 12v 150ah batari qoto dheer xitaa batari 250ah, iyo batari lithium,12v 24Ah -130Ah.
2).Baterigaagu ma buuxin karaa shuruudaha CE RoHS?
Baterigayagu waxa uu wataa shahaadada CE/RoHS.
3).Ma bedeli karnaa midabka asalka ah?
Haa, midabku waxa uu noqon karaa macaamiil-ku-samaysan hadba sida looga baahan yahay.
4).Ma daabaci kartaa sawirkayga ama astaantayda daboolka batteriga?
Haa, OEM waa la heli karaa, waxaan ku daabacan karnaa sawirkaaga ama astaantaada kiiska batteriga, waxaadna ku siin kartaa astaantaada.
5).Damaanad caynkee ah ayaad bixisaa?
Badeecadayada batteriga waxaa la isticmaali karaa in ka badan 3 sano.Wixii AGM qoto dheer baytari waqti our damaanad waa 13 bilood iyo wakhtiga dammaanadda batteriga GEL waa 3 sano. Haddii ay leedahay dhibaato tayada inta lagu jiro wakhtiga dammaanadda waxaan kuu bedeli doonaa batari cusub adiga.
Hal kartoon oo midab leh, hal batariyaal ah baytariyada ugu fiican ee tamarta qoraxda 12v 200ah wareeg qoto dheer oo dib loo buuxin karo baytari qoraxda
Tirada (Qeybaha) 1-100 >100
BariWaqtiga (maalmo) 7 In laga wadahadlo
Hore: Nidaamka Qorraxda 12V 120Ah Beteriyada Qoraxda
Xiga: Taxanaha DNS
Qiimaha baytariyada Cadceedda ee Guryaha
Qiimaha baytariyada Cadceedda
Xalalka baytariyada qorraxda
12V 100ah Aashitada Lead ee Deepcycle ama Gel rechargeab
MONO-20W Iyo PLOY-20W